अभिभावक | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: बच्चाहरु को शिक्षा
के यो वास्तवमा यति छ? यो लियो टोलस्टयका बच्चाहरु को लागि एक कविता छ?
के यो साँच्चिकै हो? के यो कविता वास्तवमा लेभ निकोलाभाइच टल्स्टोयका बच्चाहरूको लागि हो? ePointep3e35k4ae केवल पोइन्टहरू चाहिन्छ) सूर्यको राम्रो पद हुन सक्छ, यद्यपि यस्तो डाटाको कुनै स्रोतमा ...
डायपरबाट जलन त्वचा विशेषज्ञलाई सुन्नुहोस् ... छालामा जलन र एलर्जीको प्रतिक्रिया तुरून्त हटाउँदछ। हामी एडभेन्टान मलम ०.१% प्रयोग गर्छौं र केहि भयानक भएन। पातलो तहको साथ यो जलनको साइटमा लागू गर्नुहोस्, अघिल्लो ...
स्काइप Skype मा खाता नाम कसरी परिवर्तन गर्ने?
स्काइप खातामा स्काईपमा लगईन गर्ने नाम कसरी परिवर्तन गर्ने? कुनै तरिका छैन, मैले प्रयास गरें। तपाईं मात्र नयाँ लगइन सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको स्काईप नाम वा प्रदर्शन नाम परिवर्तन गर्दै तपाइँ तपाइँको स्काईप नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईंलाई अर्को चाहिन्छ भने ...
बच्चाहरूको सामाजिक कार्डहरूको बारेमा बताउनुहोस्। SPb। कसको छ? सजिलो कुरा? के तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यहाँ कतिजना अनुवाद छन्?
बच्चाहरूको सामाजिक कार्डहरूको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस्। एसपीबी को संग छ? एक सजिलो चीज? के तपाईं ती प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यहाँ कति अनुवाद गरिएको छ? जन्ममा सबै साना पिटर्सबर्गरहरू तिनीहरूको लागि शहरबाट एक सानो प्रस्तुत गर्दछन् ...
Artyom र Artemy एकै नाम हो? र आर्टियमको तर्फबाट संरक्षक कसरी सही हुनेछ - अर्टियोमोविच वा आर्टेमियोविच?
Artyom र Artemy एकै नाम हो? र आर्टियमको तर्फबाट संरक्षक कसरी सही हुनेछ - अर्टियोमोविच वा आर्टेमियोविच? कला र आर्टेमी दुई फरक नामहरू हुन्, तर उनीहरूले आर्टेमेभलाई बोलाउँदछन् ...
शिक्षकलाई स्किपिङ गर्ने बारेमा शिक्षकलाई एक टिप्पणी लेख्न कसरी?
हराइरहेको वर्गहरूको बारेमा शिक्षकलाई कसरी नोट लेख्ने? इभानोवा मरिया इवानोभना * उनको पूरा नामबाट * नोट शिक्षकको पूरा पूरा नाम (वा निर्देशक, जसको नाममा तपाईले लेख्नुहुन्छ), मेरी छोरी / छोरा * बच्चाको नाम * ...
बगैचामा समूहको बारेमा।
बालवाडी समूहहरूको बारेमा। हामीसँग एउटा मिश्रित समूह छ, २ देखि years वर्षको उमेरसम्म, त्यहाँ एक नर्सरी र उमेर भएकाहरू छन्, छोरा खुशीसँग हिंड्दछ, एल्डरहरूसँग कुराकानी गर्दछ। केही बच्चाहरू उनीहरूको समूहमा सारियो ...
बच्चाको पहिलो दाँत थियो, दाँत संग के गर्ने?
बच्चाको पहिलो दाँत बाहिर निस्कियो, दाँतलाई के गर्ने ??? हाम्रा धेरैजसो पुर्खाहरू गम्भीर चिन्तामा थिए कि बोक्सीमा के हुन सक्छ जसले हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले जादुई संस्कार गरे। यसैले ...
आमा, कुन उमेरमा तपाइँ तपाइँको बच्चालाई सिट्रस फल दिन सक्नुहुन्छ? ... उदाहरणका लागि, चियाको लागि कागती
आमा, कुन उमेरमा तपाइँ तपाइँको बच्चालाई सिट्रस फल दिन सक्नुहुन्छ? उदाहरणका लागि tea महिनादेखि चियाको निम्ती लिम्बू एक बर्षदेखि मैले ट्या tan्गेरिन, अंगूर र लिचीको टुक्रा दिएँ, मैले १.8 केही पनि दिन सुरु गरें ... यस्तो देखिदैन ...
हिरासत र गोद लेने को बीच के अंतर छ?
कसरी हिरासत अपनाउने भन्दा फरक छ? हिरासत अस्वीकार गर्न सकिन्छ .. अपनाउने सम्भावना छैन ... यो सबै फोहोर हो ... तपाईं कसरी कागजमा लेख्न सक्नुहुन्छ धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार्ने बच्चालाई ... यो राम्रो हुन्छ यदि ऊ ...
कुन उमेरमा बच्चालाई "वयस्क" केफिर दिन सकिन्छ?
कुन उमेरमा बच्चालाई "वयस्क" केफिर दिन सकिन्छ? २ बर्ष भन्दा पुरानो उमेरदेखि केफिरलाई years बर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई दिन सम्भव हुनेछ, र यो उमेर अघि नै नरिन दिनु राम्रो हुन्छ, यो बनेको छ ...
कसले केटीलाई किरा भनिन्? यस नामको साथ बप्तिस्मा लिइयो? वा अर्को बप्तिस्मामा दिइएको थियो। क्रिश्चियन नाम साइरस
कोरेस नाउँकी केटीलाई कसले बप्तिस्मा दियो? यस नामको साथ बप्तिस्मा? वा अर्को बप्तिस्मामा दिइएको थियो। ईसाई नाम साइरस होईन नारी साइरस पुरुष नाम साइरसबाट लिइएको हो (सायद तपाईलाई थाहा छ ...
केपी निदान के छ? बच्चा एक न्यूरोलोजिस्ट संग निदान गरिएको थियो
PEP निदान के हो? बच्चालाई न्यूरोपैथोलोजिस्टद्वारा पत्ता लागेको थियो अब यसलाई केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको पीएन भनिन्छ (केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको पेरिनेटल घाव)। उपचार: मसाजहरू, यदि लागूपदार्थको सिफारिस गरिएको छ भने, तपाईं तिनीहरूसँग डराउनुपर्दैन, तर ...
चिसोबाट निस्किएको चिसो रस
बच्चाले चिसोबाट चुकंदरको रस खसाल्यो। अर्को पटक, यो अधिक नबनाउनुहोस्, तर फार्मेसीले सल्लाह गरे पछि फार्मेसीमा किन्नुहोस्। तपाईंले केहि गर्नु भन्दा पहिले र बैंक दिनु भन्दा पहिले तपाईंलाई कम्तिमा आफुलाई चाहिन्छ ...
विश्लेषण गर्छ? यो सूजनको संकेत हो; पेशाबमा ल्युकोसाइट्सको नियम पुरुषहरूमा दृष्टिको क्षेत्रमा २- 2-3 र महिलामा .-5 हो। बढी हुन सक्छ: १। गलत तरिकाले संकलित विश्लेषण २। जेनिटोरिनरी प्रणालीको जलन यो हो ...
कुन खिलौनाहरू2वर्षमा बच्चा खरीद गर्न आवश्यक छ
केटाकेटीले २ वर्षको उमेरमा के खेलौना किन्नुपर्दछ मेरा नातिनातिनाहरू ठूला मोज़ेक, ---2--4 -१२ देखि फ्ल्याट पजलहरू र अन्य भागहरूमा धेरै मनपर्दछन्। क्युब्सको बारेमा नबिर्सनुहोस् - -6--9 बाट बनाउनुहोस् र ...
आमा मलाई भन्नु हुन्छ जब बाल माछा र के गरिसक्नु हुन्छ?
आमा, मलाई भन्नुहोस् तपाईको बच्चालाई कहिले माछा दिनुहुन्छ र कस्तो किसिमको? Krasnoprka दुई ​​महिना देखि दिन सकिन्छ। तर मात्र यदि यस उमेरमा बच्चासँग सबै 32२ हुन्छ ...
तपाईंको बच्चा कति महिनामा आफ्नै हिंड्न थाल्यो?
तपाईंको बच्चा कति महिनामा आफ्नै हिंड्न थाल्यो? बच्चाहरू सबै फरक छन्। मेरा दुबै छोराहरू नौ महिनामा पुगेका थिए (दश भन्दा नजिक)। म एक राम्रो स्वस्थ वयस्क मानिसलाई चिन्छु, जो सानो छ, ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 34 अर्को पाना
77 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,021 प्रश्नहरू।